Wararka Gudaha – Radio Alfurqaan | Xarunta Wararka Sugan
Degeystayaasha iyo akhristayaasha ku xiran Mareegta Idaacadda Islaamiga ah ee Al-furqaan, waxay had iyo goor halkan kala socon karaan Wararka iyo Barnaamijyada ay Idaacaddu baahiso. Maanta waa Khamiis Taariiiikhda hijriguna waxay ku beegan…
Askari Lagu dilay Muqdisho iyo Itoobiyaan lagu dilay Bakool.
Waxaa goordhow magaalada caasimadda ah ee Muqdisho lagu dilay askari katirsan ciidamada Dowladda federaalka. Degmada Kaaraan ee gobolka Banaadir ayaa lagu dilay askariga, waxaana ragga dilka geystay oo katirsanaa Xarakada…
Dhagayso Barnaamijka Dhuuxa Waraysiyada 18 10 1443.
Dhageystayaasha iyo akhristayaasha ku xiran Barta whatsapka idaacadda Alfurqaan waxay had iyo goor halkan kala socon karaan Wararka iyo Barnaamijyada ay Idaacaddu baahiso. Waa Habeennimo Khamiis ah Taariikhda hijriguna waxay ku beegan…
Dhegeystayaasha iyo akhristayaasha ku xiran Mareegta Idaacadda Islaamiga ah ee Al-furqaan, waxay had iyo goor halkan kala socon karaan Wararka iyo Barnaamijyada ay Idaacaddu baahiso. Maanta waa ArbacoTaariiiikhda hijriguna waxay ku…
Dhagayso Barnaamijka Dhuuxa Waraysiyada 17 10 1443.
Axmad	 May 17, 2022 0